BreakingNews: Kanpelet Khuapi Chung Ah CDF Le Ralhrang An I Kah – Hakha Cherry
Atangah Kawl in rel khawh si.) Chin ramkulh, Kanpelet khuapi pawng hrawnghrang ah SAC ralhrang phu le CDF Kanpelet ralkap phu kar, tuzing suimilam 7am hrawngah kahdohnakachuah i, SAC ralhrang phu lei nih hriamnam ngan an kahmi minung umnak inn pawngatlami an puah caah inn cheukhatarawk tiah theihasi.
Kanpelet khuami pakhat nih, “Kanmah inn le ka patete inn karlak ah hriamnam ngan kuanatla caah innarawk ngai. Keimah ka itnak khan i thlalangakuai i ka changtling cung le khiangthong cungatla caah aa ning. Minung cu kan i hliam hraw lo” tiahasocial media ahatarlangh hiasi.
SAC ralhrang pawl nih kahmi hriamnam ngan kuan 8 cu Kanpelet khuapi chung electric mei zung, Myanmar Economic Bank dum pawng inn hna kar an tla tiah theihasi.
Kanpalet khuapi chung ah kahdohnakaum rih ko tiah zumhasi i, cu kahdohnak kong he pehtlaih in CDF lei nih thawngthanhmiaum rih lo tiah Khit Thit Media nihatarlangh hiasi. Chinland News Agency – CNA
ကန်ပက်လက်မြို့ပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနှင့် CDF တိုက်ပွဲဖြစ်နေ၊ စစ်ကောင်စီမှ ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးများ လူနေအိမ်များအနီး ကျရောက်ပေါက်ကွဲ
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၁၅ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကန်ပက်လက်မြို့အနီးဝန်းကျင်တွင် အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များနှင့် ကန်ပက်လက် CDF တပ်ဖွဲ့ကြား ယနေ့နံနက် ၇ နာရီခန့်မှ စ၍ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီး စစ်ကောင်စီမှ ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးကျည်ဆံများသည် မြို့တွင်းရှိ ပြည်သူ့နေအိမ်များအနီးကျရောက်ပေါက်ကွဲကာ ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ကန်ပက်လက်မြို့ခံတစ်ဦးမှ “ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ ဦးလေးတို့အိမ်ကြား လက်နက်ကြီးကျလို့ အတော်လေးပျက်စီးသွားတယ်၊ ကျွန်တော်အိပ်နေတဲ့အခန်းထဲကမှန်ကွဲပြီး ခေါင်းအုံးနားလေးနဲ့ ခြင်ထောင်ပေါ်ကျလို့တော်သေးတယ် လူတော့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူး” ဟု ၎င်း၏ လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားထားသည်။
စစ်ကောင်စီတပ်မှ ပစ်ခတ်သည့် လက်နက်ကြီး ကျည် ၈ လုံးသည် ကန်ပက်လက်မြို့ လျှပ်စစ်ရုံး၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးခြံဝန်းနှင့် ကပ်လျှက် နေအိမ်များကြား ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြောင်း ဒေသသတင်းရင်းမြစ်များမှ ဖော်ပြသည်။
ကန်ပက်လက်မြို့ပေါ်တွင် တိုက်ပွဲ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ယူဆရပြီး တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်နှင့်ပတ်သက်၍ CDF မှ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိသေးပေ။Credit: Khit Thit Media